युएईमा नेपाली व्यवसायी बढ्दै «
युएईमा नेपाली व्यवसायी बढ्दै
यूएई । लामो समयदेखि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिँदै आएको यूएई नेपाली कामदार आयात गर्ने देशबाट नेपाली लगानीकर्ता आकर्षण गर्ने मुलुकको रूपमा पनि परिचित हुँदै गएको छ । यूएईमा नेपालीले रोजगारीमात्र नगरेर व्यवसायमा लगानीसमेत बढाउँदै लगेका छन् । यसले गर्दा नेपालीले आम्दानीमात्र होइन, नेपालीलाई नै रोजगारी दिनेसम्म हैसियत बनाउँदै लगेका छन् । विश्वमा नै सेवामूलक व्यावसायिक हब बन्दै गएको यूएईमा नेपालीले जमेर नै व्यवसाय विस्तार गर्न थालेका छन् ।
२ वर्षअघि नेपालको व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बिजनेस काउन्सिल दुबई नामक निकाय स्थापना गरेपछि नेपाली लगानीकर्ता यूएईमा बढ्दै गइरहेका छन् । यसले गर्दा नेपाली व्यवसायीलाई यो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न थप सहयोग मिलेको छ । यो संस्थामा सदस्य हुन नेपाली नागरिकले बिजनेस गर्नका लागि अनुमति लिएको र अन्य तोकिएका प्रावधान पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
काउन्सिलको सदस्यताका लागि १ हजार दिराम अर्थात् नेपाली २८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाली राजदूतपछि यूएई सरकारबाट मान्यता प्राप्त नेपालीहरूको पहिलो व्यावसायिक संस्थाका रूपमा नेपाली बिजनेस काउन्सिल रहेकोे छ । यसले विभिन्न व्यवसायलाई सदस्य बनाएर नेपालीको व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्दै आएको छ ।
हालै नेपाली राजदूतावास यूएईका कार्यवाहक राजदूत सागर फुयाँल, श्रम सहचारी मोतीराम भुसाल र तृतीय सचिव नारायण ज्ञवालीलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा काउन्सिलले विभिन्न व्यवसायीसँग सम्झौता गरी नेपालीको लगानी बढाउन थप पहल गर्ने जानकारी दिएको छ ।
नेपाल बिजनेस काउन्सिल दुबईका अध्यक्ष डा. आसिफ अलि सिद्दिको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमले काउन्सिलमा आबद्ध व्यवसायीका लागि विभिन्न निर्णय गरेको थियो । नेपाली राजदूतावासले विदेशमा रहेर पनि सक्रिय रूपमा व्यापार गर्नुले आफ्नै देशको शान बढाइदेशको व्यापार प्रबद्र्धनमा टेवा पु¥याएको जनाउँदै राजदूतावासले नेपाली व्यसायीहरूलाई सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने भन्दै केही समस्या परेमा दूतावासमा आउनसमेत आग्रह गरेको छ । दूतावासले नेपाली व्यवसायीलाई केही प्रस्ताव भए दूतावास सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको थियो ।
काउन्सिलको अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको कार्यक्रममा युएईमा रहेका नेपाली व्यवसायीहरूले काउन्सिललाई नेपाली लगानीकर्ताको सहयोगमा सक्रिय भएर लाग्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा बिजनेस काउन्सिलले नेपालीको हितमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइएकोे थियो । यूएईमा गत जनवरीबाट लागू गरेकोे भ्याटका बारेमा संस्थामा आबद्ध व्यवसायीलाई जानकारी नगराएकोमा ध्यानार्कषण गएको थियो ।
यूएईमा करिब एक हजार नेपाली व्यापारी रहेको अनुमान गरिए पनि काउन्सिलमा हालसम्म करिब ३० को हाराहारीमा मात्र व्यवसायी आबद्ध रहेका छन् । यूएईमा विभिन्न प्रकारका व्यवसाय गरेका व्यवसायी फर्म धेरै भए पनि काउन्सिलले सबैलाई समेट्न सकेको छैन । दुबई बिजनेस काउन्सिलले यूएईमा रहेका नेपाली व्यवसायीको ईच्छाअनुरुप काम गर्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । काउन्सिल वैधानिक संस्था भएका कारण झन्झटिलो दर्ता प्रक्रियाका कारण सबै व्यवसायी काउन्सिलमा दर्ता हुन नसकेको भनाइ रहेको छ ।
बिजनेस काउन्सिलको सदस्यता भए विभिन्न व्यवसायमा छुट लिन सकिने सम्झौता यसै कार्यक्रममा गरिएको छ । अल नाज्मी अधिवक्ता तथा कानुनी परामर्श देह्रा दुबईमा रहेको कम्पनीले नेपाल बिजनेस काउन्सिलका सदस्यहरूलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श दिने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसरी नै नेपाल एयरलाइन्सका कन्ट्री मेनेजर रमेश पौडेल र बिजनेस काउन्सिलका अध्यक्ष डा. आसिफ अलि सिदिकीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौतापत्रमा नेपाल बिजनेस काउन्सिलका सदस्यहरूलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल बिजनेस काउन्सिलका सदस्यहरूले अब ट्राभलमा टिकट खरिद गरेमा सर्भिस चार्जमा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । छुट व्यवस्था गरिएका ट्राभलहरूमा वर दुबईमा रहेको नमस्ते ट्राभल, शुभयात्रा ट्राभल, गोल्डेन एभरेष्ट ट्राभल र वर दुबईमा रहेको सन एन्ड मुन ट्राभल रहेका छन् ।
यसरी नै रेष्टुरेन्टमा दस प्रतिशत छुट व्यवस्था गरिएको छ । युएईमा नेपालीको रेस्टुरेन्ट उल्लेखनीय मात्रामा भएपनि जम्मा दुईवटा रेस्टुरेन्टसँग मात्रै सम्झौता भएको छ । यी रेस्टुरेन्टमा कुनै पनि प्रकारको खाना खाँदा नेपाल बिजनेस काउन्सिल दुबईमा सदस्यहरूले दस प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
छुटको व्यवस्था गरिएका रेष्टुरेष्टमा वर दुबईमा रहेको चौतारी रेस्टुरेन्ट र सिल्भर स्पोन रेस्टुरेन्ट रहेका छन् । नेपालीको प्रत्यक्ष लगानीमा संचालित दुबईको अल्कुजमा रहेको जिकेएस टायर कम्पनीमा हुने ओएल च्यन्ज नयाँ टायर राख्नेलगायत सम्पूर्ण गाडिको कामको सर्भिस चार्जमा २५ प्रतिशत छुट दिने हस्ताक्षर भएको छ ।